ကျွန်တော် ရှာဖွေထားသော Windows ခွေများ ( ၁ )နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Windows7SP1 OEM Activated + Hiren's BootCD Made by Share10s.Com
ကျွန်တော် Windows ခွေတွေ မတင်ခင် ဘာကြောင့် OEM ကိုရွေးပြီး တင်ပေးလိုက်လည်း ဆိုတာကို ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဟိုတစ်နေ့က ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ သူက ပြောပြပါမယ် .. ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ မှာ Windows တွေတင်မယ်ဆိုရင် တွေ့ကရာ ဖြစ်ကတက်ဆန်း Windows7၊ Windows XP ဆို ပြီးရော ဆိုပြီး မတင်ဖို့ မိမိတို့ တင်မဲ့ Windows ဟာ OEM Version ကို ရွေးပြီးသုံးဖို့ ပြောပါတယ် .. ဘာကြောင့် OEM Version ကိုရွေးပြီး သုံးသင့်လည်း ဆိုတော့ OEM Version ဟာ Latop ဆိုရင် သူရဲ့လက်တော့ အမျိုးအစား Windows အမျိုးအစားလိုက် ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို Destop ဆိုရင်လည်း မ်ိမိတို့ Destop ရဲ့ Motherboard အမျိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows အသုံးပြုတာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ Error တွေ အများအပြား ကြုံလာခြင်း တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. သဘောကတော့ .. အမျိုးအစား တူတာကို ရွေးပြီးသုံးတဲ့အတွက် Windows တစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ် ဆိုရင် Error နည်းနည်းနဲ့ ရေရှည်မှာ Windows Error တွေကြောင့် စိတ်ညစ်စရာမလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် .. OEM Version (Original Equipment Manufacturer)
သူကတော့ အခြား Version တွေနဲ့ မတူပါဘူး။ Customer ကိုယ်တိုင် Modified လုပ်လို့ ရမယ် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခွင့် ၇နိင်လာဖို့တွက် recomented ကို အပြည့်အ၀ သုံးခွင့်ရလာပါပီ။ ဒါပေ့မယ် Window ဆိုတာ Close Source ဆိုတာကိုတော့ မမေ့ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ၀ယ်ယူသူ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Version လို့ ခေါ်ပါတယ်။သူကတော့ ရိုးရိုး Version တွေကနေပီးတော့ တန်းပီး Upgrade လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီ Version ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ Driver တွေကို Disk image လုပ်ထားတဲ့နေရာကပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Recovery disk ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် Driver တွေကို ပြန်သွင်းယူလို့ရပါတယ်။ နောက်တခုက OEM Version မှာ Driver တွေ ကို အထူး သီးသန့် ရှာယူစရာ မလိုတာပါပဲ့။ သူ့မှာ Retail version ရဲ့ Beautiful packaged ပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် လည်းလိုအပ်လို့ လိုက်ရှာထားရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်လိုပဲ လိုအပ်တဲ့ သူတွေရှိရင်လည်း အလွယ်တကူ သုံးလို့ရအောင် ကျွန်တော် ရှာလို့ရတာလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အကုန်လုံးကို ဒေါင်းလော့ ချထားစေချင်ပါတယ် .. တကယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ် .. ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကတော့ နည်းနည်း များပါတယ် .. Direct Link ကနေပြီး Download ချချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ရှာထားတဲ့ http://h33t.com/ ရဲ့ Link တွေကိုပဲ ကျွန်တော် ပြန်ညွန်းလိုက် ပါတော့မယ် .. Internet Connection မကောင်းလို့ အပိုင်းလိုက် ဒေါင်းလော့ချချင်တယ် တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ကျွန်တော့် ဆီမှာ နက်မကောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး 100 MB စီနဲ့ Ifile.it ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒါကတော့ Windows7SP1 OEM Version ပါ .. Hiren's BootCD ပါ ပါပြီးသားပါ .. အောက်မှာ သူရဲ့ Imformation တွေကိုလည်း မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..အားလုံးပေါင်း 4.06 GB ရှိပါတယ် .. Windows7OEM Sp1 AIO Activated + Hiren's BootCD [Tested] [Original] Windows7SP1 OEM Activated + Hiren's BootCD Made by Share10s.Com
Window Se7en OEM Sp1 AIO
Internet Connection ကောင်းလို့ ဖိုင်တစ်ခုထဲကို Direct Download ချချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ မူရင်းလင့်ကနေ သွားပြီးဒေါင်းလော့ ချလိုက်ပါ .. အဲ့ဒီအတွက် Torrent Downloader တစ်ခုခုတော့ လိုပါလိမ့်မယ် .. http://h33t.com/details.php?id=3b6a7fd9e204482dd4bca482807423fdd1c91269
တကယ်လို့ Connection မကောင်းလို့ အပိုင်းလိုက် ဒေါင်းလော့ ချချတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Ifile.it ကနေ တင်ပေးထားတာ ရှိပါတယ် .. တစ်နေ့ကို မိမိတို့2ပိုင်းရရ3ပိုင်းရရ ချထားလိုက်ပေါ့ဗျာ .. တကယ် အဖိုးတန်ပါတယ် .. အပိုင်း အားလုံးကို ဒေါင်းလော့ချပြီးပြီ ဆိုတော့မှ အပိုင်း ( 1 ) ကနေစပြီး ဖြည်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် .. http://ifile.it/0g67nlfhttp://ifile.it/zxgc71khttp://ifile.it/rf9uscyhttp://ifile.it/xtc2l5whttp://ifile.it/ji8slkbhttp://ifile.it/6kgmfp3http://ifile.it/jn0ezl4http://ifile.it/bczv2uihttp://ifile.it/dl5hwzxhttp://ifile.it/n3fs5iyhttp://ifile.it/f5w4qjshttp://ifile.it/but642shttp://ifile.it/iko15j4http://ifile.it/3csl26ehttp://ifile.it/kv8tm3xhttp://ifile.it/g7c4yp1http://ifile.it/eq81i54http://ifile.it/v87235bhttp://ifile.it/96jytiohttp://ifile.it/davib7yhttp://ifile.it/hcer7bvhttp://ifile.it/uvr13lnhttp://ifile.it/ldtnr8bhttp://ifile.it/j2vzum3http://ifile.it/uk8wsxehttp://ifile.it/xjliehzhttp://ifile.it/qjldwkyhttp://ifile.it/6nwi49rhttp://ifile.it/ptvqya2http://ifile.it/60mer85http://ifile.it/smi1g2xhttp://ifile.it/vuxz27thttp://ifile.it/8hivdlyhttp://ifile.it/btrhw68http://ifile.it/zg42ewthttp://ifile.it/mdwzk6rhttp://ifile.it/hazjy6rhttp://ifile.it/xh8qlykhttp://ifile.it/nf6q2pb
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. စာရေးသူအကြောင်း
Part 1 ,2,3,4,5, ပြီးတော့ Part9ဖြစ်သွားပါတယ် ပြန်စစ် ပေးပါလားPart 11, 12 error တက်နေပါတယ်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့အကို .. အပိုင်း (5) ပြီးတော့ (9) ဖြစ်သွားပါတယ် .. အပိုင်း ( 39 ) နောက်မှာ အပိုင်း (6) ကနေပြီးတော့ အပိုင်း (7) အထိပြန်ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ .. အပိုင်း ( 11 ) နဲ့ အပိုင်း ( 12 ) ကဘယ်လို အယ်ရာမျိုးတက်တာလည်းခင်ဗျာ .. ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်အကို ..
ကိုနေမင်းရေ ကျွန်တော့်computer မှာ Mouse arrow မ ရွေ့တော့ဘူး Keyboad တော့ကစားလို့ရတယ် ကျေးဇူးပြုပြီးနည်းလမ်းကောင်းလေးညွန်ပေးပါ
ဟုတ်ကဲ့အကို ဖြစ်နိုင်တာကတော့ USB ကတစ်ခုခုလွတ်နေလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်အကို .မောက်စ် လဲပြီး တပ်ပြီးသုံးကြည့်လိုက်ပါအကို .. ဒါဆိုမောက်စ်ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်သိရပါလိမ့်မယ် ..
အစ်ကိုဆရာစီးဖေါ် ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး လေးစားလွန်းလို့ပါ အစ်ကိုရာ ကျွန်တော်ကတော့ အစ်ကိုတင်သမျှကိုဒေါင်းရင်းနဲ့ ၅၀၀ ဂျီဘီ ဟါဒ်ဒေစ်လည်း ပြည့်သွားပါပြီး နောက်တစ်လုံးပြန်ဝယ်ပြီးဆက်ဒေါင်းမယ်အစ်ကိုရာ လေးစားပါတယ် အရမ်းလည်းကျေးဇူးတင်တယ် ဆထက်ထမ်းပိုးသည်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်အစ်ကို လေးစားလျက် (နေစိုး)
ကိုနေမင်းမောင်ရေ......... ၀င်းဒိုးခွေလာဒေါင်းသွားပါတယ်။ Part 12 ကိုဒေါင်းတာ removed file ပြနေတယ်အကို။ အပန်းမကြီးရင် ပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်လေးစားလျက်ကိုထူး
Scribd.com မှ PDF ဖိုင်ဒေါင်းလော့ချနည်း
PHOTOSHOP TOP SECRET DVD.3
Folder Lock v.7.0.2 + Serial
TwistedBrush_Pro_Studio_18.14 + Keygen
Dictionary .NET 4.1.4296 ML + Portable
Curved Glass FX - Theme For Windows 7
Mango Theme for Window 7
MicroStation XM V8i V8.11.05.17
Upload တင်ခြင်း နှင့် Download လုပ်ခြင်း အကြောင်း...
Internet Download Manager 6.07 Build 12 Final Port...
WinRAR Beta 1 Portable
လိပ်စာအတုနဲ့ E-Mail ပို့ကြရအောင်
Kapersky Daily Key ( 3.10.2011 )
Toshiba Satellite C665 Drivers for Window 7
Kaspersky Rescue Disk CD/USB 10.0.29.6 [02.10.2011...
Internet Download Manager 6.07 Build 12 Final Mult...
Window7Themes Collection
Excel 20 Lessons ( မြန်မာ E-Book )
G-Mail ရဲ့ လျှို့ ၀ှက်ချက်တွေ ( E-Book )
AAA Logo 2010 v 3.10 Portable